Ny server PetrPikora.com dia voaaro amin'ny HTTP Strict Transport Security (HSTS) ho an'ny fiarovana tsara indrindra anao.HTTP Safe Security(HSTS) No atao hoe siansa ao amin'ny rafitra fiarovana izay miaro ny tambajotra ny fifandraisana eo amin'ny tranonkala navigateur sy ny tranonkala mpizara teo anoloan'ny manambany fanafihana sy fakàna an-keriny Manamora fiarovana manohitra fifandraisana (izany hoe.cookie hijacking). Ny mekanika dia ahafahan'ny mpizara tranonkala manery ny mpitety tranonkala hampifandraisina amin'ny fampiasana ny fifandraisana HTTPS amin'ny endritsoratra, ka manafoana ny fampitaovana ny data amin'ny alàlan'ny protocol HTTP tsy fantatra. HSTS mamaritra ny RFC 6797. Ny tranonkala web dia manetsika ny HSTS amin'ny fampiasana ny lohan'ny HTTPHentitra-Transport-Security,izay mamaritra ny habetsaky ny fotoana ahafahan'ny navigateur miditra amin'ny serivera fotsiny. Ny HSTS dia manampy amin'ny fiarovana ny rindrambaiko amin'ny aterineto amin'ny fanoherana (fisintonana) sy ny famelezana amin'ny aterineto.Misaotra HSTS rafitra manana mpikapoka, izay mampiasa olona-in-the-afovoany fanafihana, tena nihena vintana fa ny fisamborana na fangatahana na fitakiana nalefa eo amin'ny mpampiasa sy ny tenona fampiharana. Tsy miahy ny fiarovana!
Raha tianao, amin'ny fotoana rehetratsy mofomamy antontan-taratasy avy amin'ny Google IncGDN ny alalan 'Nanda DoubleClick Cookies.
Torohevitra Recommended:Ny adiresy web dia: https://petrpikora.com.
Ao amin'ity fizarana ity dia tokony hanondro ny fampahafantarana manokana avy amin'ny mpampiasa sy ny mpitsidika ao amin'ny tranokalanao ianao. Azo atao, ohatra, ny angon-drakitra transakta - mividy fampahalalana; fampahalalana ara-teknika - fampahalalana cookie; ary fampahalalana manokana - fampahalalana momba ny kaonty sy adiresy mailaka.
Torohevitra Recommended:Rehefa milaza ny hevitr'ity tranonkala ity ny mpitsidika, ny angon-drakitra hita ao amin'ny tsetsatsetsa fanamarihana, ny adiresy IP an'ny mpamaky, ary ny solon'anarana mpampiasa azy mamaritra ny browser dia manangona, manampy amin'ny fikarohana spam.
Torohevitra Recommended:Raha mampakatra sary ao amin'ity tranonkala ity ianao, dia tokony tsy misintona sary ianao amin'ny alàlan'ny angon-drakitra (GPS EXIF)). Ny mpitsidika Site dia afaka mijery sy mijery ireo angon-drakitra avy amin'ny sary ao amin'ny tranonkala.
Torohevitra Recommended:Raha manampy valiny ao amin'ny tranonkalanay ianao, dia avelao izahay hamonjy ny anaranao, ny adiresy mailaka, ary ny tranokalan'ny cookies. Amin'izany fomba izany, miezaka mampitombo ny fampiononanareo izahay rehefa manoratra fanamarihana vaovao, ka tsy voatery hameno izany intsony. Ireo cookies ireo dia haharitra herintaona.
Torohevitra Recommended:Ireo lahatsoratra ao amin'ity tranonkala ity dia mety ahitana votoatin'ny tranonkala (ohatra, Video, sary, lahatsoratra, sns.). Ny votoatin'ny tranonkala hafa avy amin'ny tranonkala hafa dia mitovitovy amin'ny fomba fitsidihan'ny mpitsidika iray hafa.
Torohevitra Recommended:Raha manampy valin-kevitra ianao, dia hohazavaina tsy misy farany ny fanehoan-kevitra sy ny metadata. Ny tahirin-kevitra dia voatahiry mba hahafantarana sy hanaiky ny fanehoan-kevitra rehetra manaraka, fa tsy mitazona azy ireo amin'ny filaharam-potoana maoderina.
Torohevitra Recommended:Raha manana kaonty eto amin'ity tranonkala ity ianao na nanampy fanehoan-kevitra ato, dia azonao atao ny mangataka tahiry miaraka amin'ny fanondranana manokana momba ny angon-drakitra izay hitantsika momba anao, anisan'izany ny fampahalalana rehetra omenao anay. Azonao atao ihany koa ny mangataka ny fanesorana ireo angona manokana hitanay momba anao. Ity safidy ity dia tsy ahitana ny angona izay takiana amintsika hitazonana ny antony ara-panjakana, ara-dalàna na ara-piarovana.
Torohevitra Recommended:Ny fanehoan-kevitry ny mpitsidika dia azo henoina amin'ny alàlan'ny serivisy fanaraha-maso spam-automatique izay afaka mipetraka any ivelany.
Raha mila fanazavana bebe kokoa ianao na manana fanontaniana momba ny politikan'ny fiainanao manokana, dia tsidiho azafady mba hifandray aminay amin'ny alàlan'ny mailakaPrivacy.
Toy ny maro hafa Internet, www.PetrPikora.com mampiasa ny vatan-kazo raki-daza. Ireo antontan-taratasy hazo Merel mpitsidika ny vohikala - Matetika ny fitsipika ho an'ny fampiantranoana fomba orinasa sy ny ampahany amin'ny fampiantranoana ny Analytics tolotra. Ny fanazavana ao anatin'ny antontan-taratasy iray loga dia ahitana Internet Protocol (IP) adiresy, navigateur karazana, Internet Service Provider (ISP), daty / ora hajia, rehefa niresaka momba / hivoaka pejy, ary angamba ny isan'ny kitika. Io fanazavan io dia ampiasaina amin'ny The hamakafaka fironana, hanatanteraka ny toerana, lalana mpampiasa ny hetsika manodidina ny toerana, ary hanangona fanazavana isan'ny mponina. Ny adiresy IP, hain-tany sy ny vaovao hafa tsy mifandray amin'ny misy vaovao manokana Izany no fantatra.
www.PetrPikora.com mampiasa mofomamy mba mitahiry fanazavana momba ny mpitsidika 'safidinao, ny firaketana manokana mpampiasa-pejy vaovao izay mpitsidika ny toerana accesses na fitsidihana, ary ny personalize na ampanjifaina ny tranonkala pejy votoaty mifototra amin'ny vahiny, na hafa karazana navigateur fanazavana ny vahiny amin'ny alalan'ny mandefa ny navigateur.
→ Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia mamela azy hanolotra dokam-barotra ho an'ireo mpitsidika ao amin'ny tranonkala mifototra amin'ny fitsidihany azy ao amin'ny www.PetrPikora.com sy ireo tranonkala hafa ao amin'ny Internet.
→ Ny mpampiasa dia afaka misafidy ny fampiasana ny cookie DART amin'ny alalan'ny fitsidihana ny politikan'ny fiainana manokana momba ny fiainana manokana momba ny Adiresy Google Advertising sy Content ao amin'ny URL manaraka:http://www.google.com/privacy_ads.html
Ny sasany amin'ireo mpiara-miombon'antoka ny dokam-barotra Mety hampiasa mofomamy sy ny tranonkala loharanom eo amin'ny toerana. Ny dokam-barotra mpiara-miombon'antoka tafiditra .......
Na dia samy manana ny politikany manokana momba ny tranonkala aza ireo mpiara-miombon'antoka ireo, dia misy loharano vaovao sy tohan-dresaka atsy ho atsy:Privacy Policies.
Raha te-hanaisotra cookies ianao, dia azonao atao izany amin'ny alalan'ny safidinao tsirairay. Ny antsipirihany amin'ny antsipiriany momba ny fitantanana cookie amin'ny tranonkala manokana dia azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkala.Inona no Atao hoe Cookies?
Amin'ny fampiasana ity fanitarana ity, mety ho afaka mitahiry ny angon-drakitra manokana na mizara angona miaraka amin'ny serivisy hafa ianao.Mianara bebe kokoa momba ny fomba fiasan'io asa io, anisan'izany izay mety tianao hampidirina amin'ny politika manokana anao.
Raha tafiditra ao amin'ny kaontinao YouTube ianao, YouTube dia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny fitondranao mivantana amin'ny mombamomba anao manokana. Azonao atao ny misoroka izany amin'ny alàlan'ny fidirana ao amin'ny kaontinao YouTube.
Misy fampahalalana fanampiny momba ny fampandehanana ny angon-drakitra ampiasain'ny mpampiasa dia azo jerena ao amin'ny fanambarana manokana momba ny fiainana ao amin'ny YouTubehttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Raha mila fanazavana misimisy kokoa momba ny fomba fitantanana ny angon-drakitra, dia jereo ny Politika Vimeo Privacy ao amin'nyhttps://vimeo.com/privacy.
Misy fampahalalana fanampiny momba ny fampandehanana ny angona mpampiasahttps://developers.google.com/fonts/faqsy amin'ny politikan'ny fiainana manokan'ny Google ao amin'nyhttps://www.google.com/policies/privacy/.